४ पुस, बैतडी । ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा बैतडीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मेलौली नगरपालिका–९ का ३२ वर्षीय नारायण भट्ट र सोही ठाउँका ५८ वर्षीय नारायण भट्ट रहेको बैतडीका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उनीहरु दुवैको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
मेलौली नगरपालिका–९ असुरपाबाट मेलौलीतर्फ आउँदै गरेको सुप प्रदेश ०१००२ त ४५७७ नम्बरको ट्याक्टर आज दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा परी ट्याक्टर चालक कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–३ का २५ वर्षीय अमृत चौधरी घाइते भएका छन् । उनको स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ ।
रित्तो ट्याक्टर कसरी दुर्घटनामा प¥यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । ट्याक्टर सडकबाट करिब १०० मिटर तल खसेको छ । घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौंमा ६०२ सहित उपत्यकामा थपिए ७६७ जना कोरोना संक्रमित
परीक्षण गर्दा ५० प्रतिशतमा संक्रमण, रोकथामको तयारी छैन ?
गैँडाको खाग तस्करीमा फरार प्रतिवादी पक्राउ
प्रभु बैंकद्वारा नेपाल औषधि व्यवसायी संघसँग साझेदारी
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको माग ४३ करोड, कति हुन्छ आपूर्ति ?
अभिनेत्री कंगनाका अंगरक्षक पक्राउ, विवाह गर्छु भनेर धोका दिएको आरोप